Maqaal BOI soo daabacday: Xidiga xiligaan Hindiya ugu weyn (Salman) xitaa kama baxsan karo dabinka filimada fariinta qayaanada xambaarsan – Filimside.net
Maqaal BOI soo daabacday: Xidiga xiligaan Hindiya ugu weyn (Salman) xitaa kama baxsan karo dabinka filimada fariinta qayaanada xambaarsan
June 21, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: June 21, 2018
Shabakada Boxoffice India ayaa soo daabacday maqaal ku haboon gaabiska uu dhanka Boxoffice-ka sameeyay filimka Race 3 ayagoo iin kaga dhigeen fariintiisa qayaanada (Thriller Genre) oo waligeed daawadayaasha soo dhaweyn jirin.
Maqaalkan xiisaha badan waxaa afkaaga hooyo kuugu turjuntay shabakada Filimside fadlan hoos kaga bogo kadibna fikirkaaga nala wadaag.
Fariinta qayaanada tiyaatarada ayay kusoo laabatay balse markaan waxay dabin u noqotay xidiga xiligaan Hindiya ugu awooda badan (Salman Khan).
Waxaan horey u qornay maqaal aan kaga hadlany fashilkii SRK ka raacay sameyntii filimka Fan oo ahaa fariin qayaano, xiligaasna Salman Khan ma uusan sameyn filim fariintiisa Thriller tahay laakiin hadda ayuu la yimid.
Race 3 Flop ma ahan balse siweyn wuxuu kaga gaabiyay heerkii laga filaayay waxaana cadaatay in marnaba daawadayaasha Hindiga ah si siman usoo dhaweyn doonin fariinta qayaanada haddii aysan muusig wanaagsan, dareen qiiro leh iyo jacey lagu dhex lifaaqin waxaana xusid mudan in Race intaba uusan laheyn!
Shahrukh Khan iyo Aamir Khan horey ayay isugu dayeen sameynta Thriller weyna ku fashilmeen weliba labada filim ay sameeyeen Fan iyo Talaash midna 100 Crore ganacsi ahaan wuu gaari waayay.
Aamir Khan filimkiisii Talaash oo Semi Hit noqday waxaa caawiyay miisaaniyadiisa oo xadidneyd iyo Mumbai inuu ganacsi adag ka sameeyay.
Marka la fiiriyo filimada Thriller-ka ah ee Hit-ka ugu noqdeen dhawaanahan waa labada Blockbuster Darr iyo Agni Sakshi waxaana caawiyeen muusigada wacan iyo fariinta jaceyl ay xambaarsanaayeen.
Darr wuxuu ka faa’iideestay awoodii Sunny Deol oo xiligaas ahaa Superstar-kii Hindiya ugu awooda badnaa sidoo kalena SRK wuxuu ahaa xidig soo caan baxaayay iyo heesihiisa, dareenkiisa iyo muusigadiisa oo hirgaleen intaas ayaa sababtay inuu noqdo filimada fariinta qayaanada xambaarsan midka ugu weyn.
Dhab ahaantii Race 3 iyo Darr waxay isku mid ka yihiin awooda hogaamiyaasha sidii Sunny Deol xiligaas u awood badnaa ayuu maanta Salman u awood badan yahay laakiin Race 3 fariintiisa qayaanada sidii Darr uma dhameestirneyn waana sababta keentay in Salman mashruucaan heer waali ah gaarsiin waayay sidii uu Sunny Deol u gaarsiiyay Darr.
Waagii hore xitaa Hindiya wey sameen jireen filimada qayaanada ah sida 60-maadkii oo kale iyo 70-maadkii balse filimadaas waxaa lagu dhex lifaaqi jiray heeso wacan, dareen qiiro badan iyo jaceyl laab taabasho ah kuwaas oo noqon jireen Big Blockbusters.
80-maadkii Dharmendra oo ahaa Superstar-kii Hindiya ugu weynaa ayaa la yimid filimkii Qayamat oo fariin qayaano xambaarsanaa wuxuu noqday mid guuleestay balse heerkii laga filaayay aan gaarin weliba Qayamat lacagtii uu 1983 keenay haddii sicirka maanta lagu jaangooyo waa 125 Crore taasi oo ka dhigeyso inuu yahay filim wacan laakiin aan HIT weyn ahayn.
Amitabh Bachchan oo isagana awooda Dharam kala wareegay loona dhawaan karin ayaa bartamihii 80-maadkii la yimid filimkii fariinta qayaanada xambaarsanaa Aakhree Raasta wuxuuna noqday filim guuleestay oo Mumbai iyo Koonfurta ka gadmay balse Aakhree Raasta lacagihii uu 1986 keenay haddii sicirka maanta lagu jaangooyo waa 175 Crore taasi oo muujineyso weli inuusan ahayn Big Hit fariin qayaano xambaarsan.
Sidaa darteed Salman Khan oo maanta ah Star-ka Hindiya ugu awooda badan taariikh ahaana kuwa ugu badan safka hore kasoo gali doono isagana Race 3 wuu ka dhigi waayay Big Hit madaama fariintiisa qayaano tahay sidoo kalena ay xadidan tahay dadka daawadaan.
Shah Rukh Khan wuu ka mid ahaan jiray Stars-ka Hindiya ugu awooda badan balse si uu taariikhda kuwa ugu awooda badan safka hore kaga soo galo waa inuu ku laabtaa ama dib u hantiyaa awoodii uu lahaan jiray intii u dhaxeesay 2000 ilaa 2010.
Fadlan hoos kaga bogo 10-ka filim ee fariinta qayaanada xambaarsan (Thriller) ee lacagaha ugu badan Boxoffice-ka kasoo xareeyeen marka sicirka maanta lagu jaan gooyo filimadii soo baxeen 1993 ilaa 2018 ee xog dhameestiran shabakada BOI ka heyso:
1. Darr (1993) – 191.43 crore
2. Agni Sakshi (1996) – 189.18 crore
3. Gupt (1997) – 168.16 crore
4. Raajneeti (2010) – 147.68 crore
5. Holiday – A Soldier Is Never Off Duty (2014) – 134.43 crore
6. Race 3 (2018) – 132.50 crore (6-maalmood)
7. Race 2 (2013) – 112.26 crore
8. Ek Villain (2014) – 109.09 crore
9. Talaash (2012) – 105.26 crore
10. Ajnabee (2001) – 103.10 crore
F.G: Race 3 kaalinta 3-aad ayuu ka gali doonaa filimada lacagaha ugu badan soo xareeyeen ee fariinta qayaanada xambaarsan marka uu tiyaatarada ka dago sida muuqato ganacsi ahaan.
Waxaa Aqrisay 1,479
Ahmed Akhyaar says:
Lkn waa maxay sababta ay uga soo muuqan waayen maqaalkan filimnta thrillerka ee Guulaha waawayn gaadhay BAAZIGAR IYO RAMJAANE maadama midna blockbuster yahay midna hit ama inuun lagu xusi waaayay maadama srk uu si kasta uga wacanyahay 3da khan filimada thrillerka.
warbixintan boxofficeku dhinac bay ka rarantahay sidan filayo
Baazigar xogtiisa weli BOI ma aysan Updatr gareyn ama keydkooda kuma jiro balse Ram Jaane waxaa u diiwaan gashan inuu Action yahay fariin ahaan sidoo kalena 97 Crore ayuu keenay waa sicirka maanta hadii lacagtiisa lagu jaangooyo. Marka Top Ten xitaa masoo galaayo haddii aan Thriller xitaa u qaadano inuu yahay.